अध्याँरोमा बिरालोको आँखा किन चम्किलो देखिन्छ? – Hotpati Media
अध्याँरोमा बिरालोको आँखा किन चम्किलो देखिन्छ?
२६ चैत्र २०७६, बुधबार २०:२२ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
हामीलाई रातको समयमा टर्च लाइट बालेर हिड्न पनि हम्मे हम्मे पर्दछ । अध्याँरो वातावरणमा हिड्ने कुरा हामी कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैनौँ । तर कतिपय जनावर तथा पशु पछिंहरु रातको समयमा पनि निर्धक्क तथा सहजता पूर्वक हिडडुल गरिरहेका हुन्छन् ।
बाघ, चितुवा, विरालो, लाटोकोसेरो लगायतका मांसाहारी जनावरहरु तथा पशुपछिंहरु यसका उदाहरण हुन् । वास्तवमा यो विषय अनौठो छ । अध्यारोमा बिरालोको शरीर त देखिन्न । तर उसको आँखा चम्किएको भने प्रष्ट देखिन्छ । बिरालो झैं केही अन्य जनावर चितुवा, बाघको आँखा समेत अध्यारोमा चम्किन्छ ।